Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka dalbaday dowladda Marekanka inay xoojiyaan taageerrada dowladda | RBC Radio
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka dalbaday dowladda Marekanka inay xoojiyaan taageerrada dowladda
Posted on April 20, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya,Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka Dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya,Stephen Schwartz.
Kulanka ra’iisul wasaaraha iyo safiirka oo saacado qaatay,waxaa la sheegay in diirrada lugu saaray iskaashiga labada dowladood,waxaa kalo looga hadlay Mareykanka doorka uu ku leeyahay u gurmashada dadka Abaaraha saameynta ay ku yeesheen.
Ra’iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday safiirka in dowladda Marekanka ay xoojiso taageerada ay siiyaan Soomaaliya,waxaa kalo uu ra’iisul wasaaraha uga mahadceliyay dowladda Marekanka taageerrada ay siiyaan Soomaaliya.
Safiirka Dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa dhankiisa dowladda ku ammaanay dadaalka ay wadaan ee ku aadan hormarka dalka.
Wuxuu sheegay Marekanka inuu doonayo nabadda iyo horumarka Soomaaliya,inta wuxuu ku daray si dhaqso ah inay uga qaybqaadanayaan gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaartu saameysay ee gudaha dalka.
Laama sheegin kulanka inta uu socday in lugu soo qaaday go’aanka ay dowladda Marekanka ku dooneyso ku dhowaan shan kun oo Soomaali ah inay dalka ku soo celiso,kuwaas oo la sheegay in laga soo masaafurinayo Marekanka.
Waxaa kalo uu ku soo aaday kulanka safiirka iyo ra’iisul wasaaraha xilli ay wali Soomaaliya ka mid tahay ilaa lix wadan oo laga mamnuucay dalka ka soo jeeda inay muddo ka badan labo bilood tagaan Marekanka.